jhalanath khanal Archives - Nagarik Today
होम » jhalanath khanal
कानुनमाथि ओलीको असहमति
गत दुइदिन यता देखि के.पी शर्मा ओलीले आफ्ना विपक्षी र कानुनविद्प्रति असहमति जनै रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहस र विपक्षीको आलोचनालाई लिएर ओली आक्रोशित भएका हुन्।सोमबार युवा संघको सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश माथि आक्रोश पोखे। आफूले लेखेर दिएको फैसलामात्रै अदालतले सुनाउनुपर्ने जसरी पूर्वन्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति जारी गर्न थालेको भन्दै ओलीले कटाक्ष गरे। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् विघटनको विरोध गरेका थिए।
संसद् विघटनलाई संविधान मास्ने खेलको रूपमा व्याख्या गरेपछि ओली उनीहरू माथि खनिएका हुन्। संसद् विघटन मुद्दामा सर्वोच्चमा जारी सुनुवाइमा संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा प्रश्न उठाउने कानुन व्यवसायीमाथि पनि प्रधानमन्त्री ओली खनिएका छन्। ‘उहाँहरू त्यही चाहिरहनुभएको छ। हामीले लेखेर दिएको फैसला पढी सुनाउने न्यायाधीशबाहेकलाई हामी मान्दैनौं। यसले न्यायालय कुन अवस्थामा पुग्दैछ। कालोकोटधारी केही व्यक्तिले न्यायालयलाई कुन अवस्थामा पुर्‍याउँदै हुनुहुन्छ ? कुन हैसियतमा पुर्‍याउँदै हुनुहुन्छ ? बडो गम्भीर विषय छ। पूर्वन्यायमूर्ति, उहाँहरूले न्यायालयको कसरी हुर्मत लिँदै हुनुहुन्छ, पेन्सन खाएर।
आफ्नो समयमा केही नगर्ने अनि वर्तमान न्यायालयका कामकारबाहीमाथि हस्तक्षेपकारी ताण्डव गर्ने सडकमा ? यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्‍याउँछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। उनले पूर्वप्रधानन्याधीशहरूलाई ‘आउटडेटेड एलिमेन्ट’ को संज्ञा दिए। उनले भने, ‘आउटडेटेड एलिमेन्टहरूबाट देशलाई दुष्प्रभावित हुन दिइने छैन। संकटका बेला यस्ता तत्वहरू सलबलाउँछन्।’ उनले संविधानको कमजोर र नकारात्मक व्याख्याको प्रवृत्ति सुरु भएको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरे।
सम्बोधनका क्रममा उनले नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालको चर्को आलोचना गरे। नेपाल र खनाल विरोधीसँग साँठगाँठ गर्दै आफ्नै सरकार ढाल्न लागिपरेको, खुलेआम निर्दलीय अराजक गतिविधि गरेको आरोप उनको थियो। ‘अनुचित खालको तानातान, खिचातानी, अस्वस्थ गतिविधि भइरह्यो, त्यो एक पटक होइन निरन्तर चलिरह्यो, निर्दलीय, अनुशासनहीन र अराजक क्रियाकलाप खुलेआम भइरहे, यो सहनसक्ने कुरै छैन’, एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले भने।
नेपाल पक्षले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जलि दिएको ओलीको दाबी थियो। ‘यति निर्लज्ज त मैले डेमोक्रेसीमा कहिल्यै देखेको छैन। डेमोक्रेसीमा मूल्य–मान्यता छाडेर फ्लोर क्रस गर्ने–गराउने, बागी विद्रोही उम्मेदवार उठ्ने–उठाउने, बागी विद्रोहीलाई सगौरव घोषणा गर्ने, जिताउन मत हाल्ने, यो कुरा पत्रकार महासंघको चुनावमा पनि देखियो। वाग्मतीमा पनि देखियो। र, हामी एक्लै बहुमतमा थियौं, पार्टीभित्रैबाट खुलेआम अन्तरघात गरेर, अनुशासनहीनताको नांगो नाच प्रस्तुत भयो’, ओलीले भने। आइतबार महिला अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रममा बालुवाटरस्थित सरकारी निवासबाट सम्बोधन गर्दै ओलीले पार्टीभित्रकै झलनाथ खनाल र माधव नेपालले पार्टीलाई धराशयी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए।